SHAACIN: Sirta ka dambeysa xariga weriye Cawil Daahir Salad iyo waxa ka carreysiiyey Xasan Sh. - Caasimada Online
Home Maqaalo SHAACIN: Sirta ka dambeysa xariga weriye Cawil Daahir Salad iyo waxa ka...
SHAACIN: Sirta ka dambeysa xariga weriye Cawil Daahir Salad iyo waxa ka carreysiiyey Xasan Sh.
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maqribnimadii habeen hore xabsiga loo taxaabay agaasimihii TV-da gaarka loo leeyahay ee Universal u qaabilsan Africa C/llaahi Xersi Kulmiye iyo barnaamij soo saare sare Cawil Daahir Salaad oo ka mida howlwadeenada TV-ga kadib markii ciidamada Nabadsugidda Soomaaliyeed ee Gobolka Banaadir u yeereen, kadibna ay ciidamo kale tageen xaruntii Teleshinka ee magaalada Muqdisho.
Waxaan faaqideynaa Dooda ka baxday TV-da Uniuversal iyo saameynta ay yeelatay oo aanu ka eegeyno warbaahin ahaan iyo dowlad ahaan.
Waxaa la xiray mas’uul sare iyo barnaamij soo saare ka tirsan Universal TV Muqdisho
Waxaa la xiray xaruntii Telefishanka ee magaalada Muqidsho, waxaana laga joojiyay shaqadii.
1 – Aan isweydiinee, amarka xariga yaa bixiyay?
2 – Maxaa lagu heystaa oo loo xiray xarunta TV-ga
3 – Maxaa lagu xiray Agaasime C/llaahi Xersi?
4 – Maxaa loo xiray Cawil Daahir Salaad?
5 – Wasaaradii ku shaqada lahayd maxaa loo ogeysiin waayay?